हार्दिक बधाई : प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) जस्तो गरिमामय पदमा छनोट हुन सफल हुनु भएकाे मा ! – Dainik Samchar
April 4, 2021 395
काठमाडौं । Inspector Sangita_pandey जी प्रहरी निरीक्षक जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति हुन सफल भएकोमा हजुरलाई हार्दिक बधाई,एंव सफलताको शुभकामना । प्रहरि निरीक्षक को नतिजा मा उहाँले नाम निकाल्न सफल हुनु भएको हो । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
Prevकृष्ण कंडेलकै अगाडी आखिर किन रोइन अस्मिता, पुरा गरिदिए अस्मिताको यस्तो सपना (भिडियो सहित)
Nextईलाम कन्याम घुमेर फर्किदै गर्दा मोटरसाइकल दु’र्घ’ट’नामा परि एक जोडिको मृ’त्यु
नेपालको नाम विश्व सामु चम्काएका विश्व च्याम्पियन कार्की काडमाडौँ आउदै गर्दा बाटोमै अस्ताएको त्यो अन्तिम पल !
कोरोना जोखिमसंगै काठमाडौंमा चल्ने सवारीसाधनमा सुरु भयो नयाँ नियम